Creative Writing » တစ်​ကယ်​​တော့ ဘယ်​သူမှ မနိုင်​ကြပါဘူး	34
တစ်​ကယ်​​တော့ ဘယ်​သူမှ မနိုင်​ကြပါဘူး လတ်​​တစ်​​လော ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​မှာ ​လူတိုင်းလိုလို တင်​နေကြတဲ့ ပို့စ်​က ” ​ကျောင်းသား​တွေ နိုင်​တယ်​ ” တဲ့ ။ ( တစ်​ဖက်​က လည်း ​ကျောင်းသား​တွေကို သူပုန်​လိုလို ​ပြော​နေကြတာ​တွေလည်း ရှိသ​ပေါ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ​နေ၀န်းနီ က အ​ကောင့်​​တွေစပြီး အက်​ကတည်းက / လက်​ခံကတည်းက ​သေချာစ်ီစစ်​ပြီးမှ လက်​ခံခဲ့ တာ​ကြောင့်​ ဆန့်​ကျင်​ဘက်​တင်​တဲ့ ပို့စ်​​တွေ အ​တွေ့ရနည်းပါတယ်​ ) ။ အခု လက်​ရှိ​ကျောင်းသား​တွေ မ​ပြောနဲ့ဦး ။ ရှစ်​ဆယ့်​ရှစ်​ ​ကျောင်းသား​တွေ​တောင်​ အသည်းအသန်​ တိုက်​ပွဲဝင်​​နေကြရတုန်း ။လယ်​ဗယ်​ညီ ကွင်းမှာ နည်းစနစ်​မှန်​မှန်​ကန်​ကန်​နဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိ ကစားရတဲ့ ပြိုင်​ပွဲမှ မဟုတ်​တာ ။ ဘယ်​လိုလုပ်​ နိုင်​ဦးမလဲ ။ ​ဘောလုံးပွဲ စကားနဲ့ ​ပြောရရင်​ ကွင်းလယ်​ဒိုင်​​ကော စည်းကြပ်​ဒိုင်​နှစ်​​ယောက်​ပါ တစ်​ဖက်​အသင်းဘက်​ပါ​နေတာ ။ ဆယ့်​​လေး​ယောက်​နဲ့ ဆယ့်​တစ်​​ယောက်​ ပွဲ ကြည့်​မ​ကောင်းတာ​တော့ အမှန်​ ။ သန်းငါးဆယ်​​သောပြည်​သူ​တွေက ပွဲကြည့်​ပရိဿတ်​ ။ တစ်​ချို့များ ပွဲကြည့်​ရင်း သန်းတုပ်​မပျက်​ ။ အတင်း​ပြောမပျက်​ ။ အဟုတ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ သိသ​လောက်​က​တော့ အခု ​ကျောင်းသား သပိတ်​မှာ အားလုံးက လက်​မခံပါဘူး ။ အပြင်းအထန်​ ကန့်​ကွက်​သူ​တွေက စားပါးဝ​နေတဲ့ ပညာ​ရေး ၀န်​ထမ်း​တွေများပါတယ်​ ။ အပြင်​ကျူရှင်​​တွေနဲ့ ​ဘော်​ဒါ ​ဆောင်​​တွေကလည်း တစ်​သ​ဘောထဲပဲ ။ ပြင်​ဆင်​မဲ့ ဥပ​ဒေ သာအတည်​ဖြစ်​ခဲ့ရင်​ သူတို့ ဖွင့်​ထားတဲ့ ကျူရှင်​​လေး​တွေ ​ဘော်​ဒါ​ဆောင်​​တွေက အ​ဟောသိကံ ဖြစ်​ရ​တော့မှာပါ ။ သူတို့အ​နေနဲ့ လက်​ရှိက​နေ လက်​မဲ့ အဖြစ်​မခံနိုင်​ပါဘူး ။ ​ကျောင်းခန်းထဲမှာ တတ်​​အောင်​သင်​ ဆရာနဲ့ တပြည့်​ အပြန်​အလှန်​ အမှတ်​​ပေး ဆို​တော့ စန်းစန်းတင့်​ဖြစ်​ကြသ​ပေါ့ ။ ဟုတ်​တယ်​​လေ ။ တစ်​သက်​လုံး ပြန်​မ​ပြောရဲခဲ့တဲ့ တပြည့်​​တွေက သူတို့ရဲ့ အသက်​​မွေးဝမ်း​ကျောင်း အလုပ်​ကိုပါ ထိခိုက်​လာမဲ့ အပြန်​အလှန်​ အကဲဖြတ်​ အမှတ်​​ပေးခံရမယ်​ ဆို​တော့ ……
ပြီး​တော့ အစိုးရ လစာစား​နေတဲ့ (ပြည်​သူ့ အခွန်​ထဲကလစာထုတ်​​နေ​ရ​ပေမဲ့ တစ်​သက်​လုံး အစိုးရ လခစားလို့  သမုတ်​လာတာ နှုတ်​ကျိုး​နေပြီ ပြင်​မရ​သေးဘူး ) အစိုးရ အာဏာ တည်​မြဲ​ရေး ​ပေါ်လစီနဲ့ မိ​နေတဲ့သူ​တွေကလည်း သူတို့နဲ့ နီးစပ်​​နေတဲ့ သူ​တွေကလည်း ကန့်​ကွက်​တာပဲ ။ သူတို့နားမှာ အစိုးရ ​ကောင်း​ကြောင်း​တွေပဲ ကြား​နေရတာဆို​တော့ ပိတ်​ထားတဲ့ နားက အစိုးရမ​ကောင်း​ကြောင်း​ပြောရင်​ လက်​မခံချင်​ဘူး ။ ​ကျောင်းသား သပိတ်​လည်း ဖြိုခွင်းတယ်​ ဆို​ရော လက်​ခုပ်​ထတီးကြ​ရောပဲ ။ ဒါဖြင့်​ ဘယ်​သူ​တွေက လက်​ခံလဲ ဆို​တော့ သိတဲ့အတိုင်း အစဉ်​အလာ ပညာ​ရေး စနစ်​ကို ဆန့်​ကျင်​တဲ့သူ ။ တိုးတက်​သည်​ဖြစ်​​စေ ဆုတ်​ယုတ်​သည်​ဖြစ်​​စေ လက်​ရှိ စနစ်​ကိုငြီး​ငွေ့​နေလို့ အ​ပြောင်းအလဲ ကို လိုလားတဲ့ သူ​တွေ ( ဒီ​နေရာမှာ ဘွဲ့လက်​မှတ်​ကိုင်​ထားပြီး အလုပ်​လည်​စပ်​​နေရတဲ့ သူ​တွေ လည်းပါတာ​ပေါ့ ) ။ တစ်​ချို့က​တော့ နိုင်​ငံတစ်​ကာ က ပညာ​ရေးစနစ်​​တွေကို လက်​​တွေ့ကျကျ ​လေ့လာဖူးပြီး ဒီ​နေရာမှာ​ပြောင်းလဲသင့်​ပြီလို့ မှတ်​ချက်​ချ တဲ့သူ​တွေ ။
ဆို​တော့ကာ ဒီပညာ​ရေး ဥပ​ဒေ ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲဖို့ ရှစ်​ဆယ့်​ရှစ်​လို လှည်း​နေ​လှေ​အောင်း မြင်း​ဇောင်းမကျန်​ မစည်းရုံးနိုင်​​သေးဘူး ။ ​နောက်​တစ်​ချက်​က အာရုံ​ပြောင်းလှည့်​ကွက်​​တွေများ​နေတဲ့ အချိန်​မှာ သပိတ်​​မှောက်​လိုက်​တာက တစ်​ချက်​ ။ လက်​ရှိ​ကျောင်း​တွေ အတန်းတင်​စာ​မေးပွဲ​တွေနဲ့ အချိန်​တိုက်​​နေတာက တစ်​ချက်​ ။ ဖြိုခွင်းခံရတဲ့ အချိန်​မှာ ဦးစီး ဦး​ဆောင်​လုပ်​တဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေ ​ပျောက်​​နေတာက တစ်​ချက်​ ။ ဒါ​တွေ​ကြောင့်​ ​ကျောင်းသား​တွေ နိုင်​တယ်​လို့ ​ပြောလို့မရ​သေးဘူး ။ ဒါဖြင့်​ တစ်​ဘက်​က​ကော ။ သူလည်းရှုံးတာပါပဲ ။ သူ့အရှုံး ကအများသိပြီးသားမို့ အကျယ်​မ​ပြော​တော့ပါဘူး ။ ​နောက်​ဆုံး​တော့ နှစ်​ဖက်​စလုံး lose: lose ဂိုးမရှိသ​ရေကျသွားပါတယ်​ ။ ​နောက်​မ​ကျေပွဲ က​တော့ ​စောင့်​ကြည့်​ရဦးမှာ​ပေါ့​လေ ။ မှန်​တာ​ပြောရရင်​ ဒီပွဲက လယ်​ဗယ်​ညီ ကွင်းမှာ မပြိုင်​ရဘူး ။ ​ကျောင်းသား​တွေဘက်​မှာ နည်းပြက အနီးကပ်​ မကွပ်​ကဲနိုင်​ဘူး ။ ဘက်​မလိုက်​တဲ့ ဒိုင်​လူကြီးမရှိဘူး ။ ​နောက်​တစ်​ပွဲများ နွှဲ မယ်​ဆိုရင်​ ကြိုတင်​ပြင်​ဆင်​ဖို့ပါ ။ ​နေ၀န်းနီ
2015Mar; 12 About naywoon ni
ခင်ဇော် says: ကောင်းတယ်။
naywoon ni says: ​အော်​
ခင်ဇော် says: ပြည်ထိုင်ခိုး သူတို့ ကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေ ဆိုတော့ ထည့်မပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
တိမ်မည်း says: ဦးနီရေ ဖတ်သွားတယ်ဗျို့ …. လာမယ့် ပွဲ မကြမ်းပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေတယ်… ပြည်သူ့ မဲက ကျောင်းသားတွေ ဖက် ပါ နေပီ…. ဒီလို အချိန်မှာ ၁၁ ချက်ကို ပြန်ဖိ တောင်း စေချင်တယ်… အဲ့လိုမှ မဟုတ်ပဲ အစိုးရ အလိုမရှိ ဆိုလို့ ကတော့…. သရေပွဲ ထပ်မြင်ရဖို့ များတယ်….
black chaw says: ဘယ်သူ့ မှ မနိုင်ဘူးဆိုတော့ တစ်သင်း တစ်မှတ်စီ ခွဲယူသွားတယ်ပေါ့…။
Ma Ma says: ကြေးက သရေ အရှုံး ဆိုရင်ကော…
အနိုင်အရှုံး ဘယ်လိုပြောကြမတုန်းးးးးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: ကျတော့်အမြင်ကတော့
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အလို ဆြာသမား ပြန်လာပြီ။ ရွာထဲမှာ မြဲအောင် ဘယ်လို ကြိုးတွေနဲ့ တုပ်ထားရင် ကောင်းမလဲ။
မင်း ခန့် ကျော် says: မအားလို့ပါခင်ဗျာ။
Wow says: ကလေးတွေ အရိုက်ခံရတာမြင်တာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14409
kai says: “ကျောင်းသားတွေနိုင်တယ်” လို့.. အတည့်ပြောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
ခင်ဇော် says: နောက်မှပြောလဲ ရပါတယ် တဂျီးးးရယ်
Alinsett@Maung Thura says: အမှန်တော့ ဒီပွဲမှာ ကျနော် နိုင်တယ်
ဦးဦးပါလေရာ says: @သူကြီး
Ko chogyi says: ရာဘာအလယ်မှာ သစ်သားမဟုတ်ပါ
Alinsett@Maung Thura says: ဒဏ်ရာ သိပ်မပေါ်ပဲ
kai says: ဓာတ်ပုံတချို့ထဲ.. အဲဒီတုတ်တွေက.. ကွေးညွတ်နေသမို့.. အီးယူက.. မြန်မာရဲတွေအတွက် ..စပယ်ရှယ်တုတ်များပေးထားသလားထင်မိတာပါ… Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Alinsett@Maung Thura says: တချို့တုတ်က ရာဘာသီးသန့်လိုလိုကို အဲ့လိုေ
မြစပဲရိုး says: ကျောင်းသား တွေ ကို သနားလှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး အော်နေတဲ့ သူများထဲ မှာ
ခင်ဇော် says: စိတ်မဆိုးရင်ပြောချင်တာက….
tun swe says: မြို့​မေတ္တာ ခံယူတဲ့ ပွဲလို့ သတ်​မှတ်​ပါတယ်​
ဦးကြောင်ကြီး says: မာမွတ်ခိုမ် ပြောတဲ့ The end justifies the result အရဒေါ့ စစ်တပ်ပဲ အစဉ်အဆက် နိုင်နေတာပဲ..။ ပွဲကို စီးရီးဆွဲလိုက် လက်နက်ရှိသူ အာဏာရှင်နိုင်တာ ထားတော့။ တပွဲခြင်းအလိုက် ရှုံးတာ သုံးသပ်လျင်တော့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပြည်သူများ နှစ်နှစ်ကာကာ မယုံကြည် တန်ဖိုးမထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးမထားတော့ ကိုယ့်ခလေး ပညာရေးနဲ့ မလဲနိုင်၊ ကိ်ုယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာထိမှာ ကြောက်ရွံ့၊ အလုပ်ထိပါးမှာ စိုးရိမ်… ဖြစ်လျင် ကိုယ်ပဲခံရမှာ.. တကယ်ကောင်းစားမှာ ငါတို့ မဟုတ်ဆိုတဲ့ အတွေးက လူအတော်များများမှာ အရိုးစွဲနေပြီ။ ဒါကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ စစ်တပ်က ဖြစ်လာတိုင်း အဲဒီခြောက်လုံးတွေနဲ့ပဲ ဝါဒဖြန့်တယ်။ ကျောင်းသားမို့ မအားပေးထင်သလား.. မပူနဲ့ ဒေါ်စုလုပ်လည်း ဒီလိုပဲ ပြောလိမ့်ဦးမှာ.. နည်းသွားတာပဲ ရှိမည်။ နည်းသွားလို့ တကယ်လုပ်ကြဟေ့ဆိုတော့ ကျောင်းသားတုံးက ကန့်ကွက်သူတွေ ဓဂေါင်မှ ထွက်လာမည် မဟုတ်၊ မဲပေးတာတောင် လေသံမာမာနဲ့ ခြောက်လျင် အမေမှ အမေအော်နေသူတွေ မဲရုံကို မသွားတော့၊ ပိုခြောက်လိုက်လျင် ကြိုတင်မဲတွေ ကြံ့ဖွတ်ကို ပေးအုံးမည်။ သင်ခန်းစာက ရဲရဲလုပ်.. လက်ဦးမှု အရယူ.. အရေးသာမှ အများစု လိုက်လာမည်။ နို့မို့လို့ကတော့ ကိုယ့်ထက် လည်သူချည်းပဲ.. မမျှော်နဲ့။
Ko chogyi says: တစ်ကယ် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ခေါင်းဆောင်မယ့် ဦးကြောင်ကိုမျှော်မိပါတယ်
kai says: အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်(တွေ)တိုင်း.. အ၀ါအဖွဲ့အစည်းက.. အုပ်ချုပ်သူဘုရင်.. ဒါမှမဟုတ်..စစ်အာဏာရှင်..ဒါမှမဟုတ်.. အစိုးရနဲ့..ဟန်ချက်ညီညီကစားသွားတတ်တာကို.. သမိုင်းအဆက်ဆက်ပြနေလျှက်နဲ့.. ကိုရင်ကြောင်မျက်ကွယ်ပြုတာတော့ အံ့သြစရာ…။
Courage says: အဘနီရေ။ နောက်ထပ် မကြေပွဲဆိုတာကို ကျွန်တော့အနေနဲ့ မလိုလားပါဘူး။ အားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေဘက်က နည်းပြအဖွဲ့ထဲမှာရော အသင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သူ တွေချည်ပဲလား။ ကျွန်တော့အမြင်တော့ နည်းပြတွေထဲမှာ ကိုယ့်အသင်းနိုင်ဖို့ထက် တစ်ဖက်အသင်းကို လက်စားခြေလိုတဲ့ သူတွေ နည်းနည်းပိုများနေသလားလို့။
naywoon ni says: ကိုကာရစ်​ ​ပြောသလို Draw result ဆိုတာ ​ဘောလုံး စကားနဲ့ ​ပြောရရင်​ 1:1 ဒါမှ မဟုတ်​ 2:2 ​ပေါ့ဗျာ ။ ပွဲပြီးရင်​ ၂ဖက်​ ကစားဖက်​ချင်းလည်​ပင်းဖက်​သွားကြတာဗျ ။ အခုဟာက အဲ့သလို မဟုတ်​ဘူး ။ ရိုက်​နှိက်​ ဖမ်းဆီးနှိပ်​စက်​ခံထားရတာ​ကြောင့်​ အမုန်းတရား​တွေ ပွားကုန်​ပြီ ။ အဲ့ အမုန်းတရားကို ​ချေဖျက်​ဖို့ အချိန်​​တော်​​တော်​ယူရဦးမယ်​ ။ အမုန်းတရားဆိုတာက အရှုံးကိုဦးတည်​တာ ဒါ​ကြောင့်​ lose: lose လို့​ပြောတာ ။
Courage says: အမုန်းနဲ့စခဲ့တဲ့ပွဲ အမုန်းနဲ့ အဆုံးသတ်သွားတာ မထူးဆန်းပေမယ့် စိတ်တော့ မကောင်းစရာပါ
tun swe says: လိုင်းက မ​ကောင်း ရတဲ့အထဲမူး​နေ​တော့
မီ မီ says: လက်ရှိပညာရေးစနစ်ကို ပညာရေးဝန်းထမ်းတွေက
naywoon ni says: လက်​ရှိပညာ​ရေး စနစ်​ကို မ​ပြောင်း​စေ့ချင်​တာက အပြင်​မှာကျူရှင်​​ပေး​နေတဲ့ ဆရာ ဆရာမ​တွေက လက်​မခံချင်​ဘူး ။ အဲ့ဒါ ကိုယ်​​တွေ့ ။ စကား​ပြော ရင်း ရန်​ဖြစ်​တဲ့ အထိ​ရောက်​လာလို့ ​နောက်​ဆုတ်​​ပေးခဲ့ရတယ်​ ။ တစ်​ချို့ ဆရာ / ဆရာမ​တွေက အတန်းထဲမှာ သင်​ရတာထက်​ ​ကျောင်းဆင်းမှ အပြင်​မှာသင်​ဖို့ ပဲစဉ်းစားတာ ။ အပြင်​မှာ ကျူရှင်​သင်​လို့ တစ်​လ သုံး​လေး သိန်းရတဲ့ သူ​တွေက​တော့ လက်​ရှိ စနစ်​ကို ဖက်​တွယ်​ထားမှာပဲ ။ အဲ့ အ​မေစု တို့ ​ဒေါ်လာ စား တို့ ဆိုတာက​တော့ ကျ​နော်​နဲ့ အလှမ်း​ဝေးလို့ သိပ်​နားမလည်​ဘူး ဗျ ( ကျ​နော်​ ဘယ်​ပါတီဝင်​မှမဟုတ်​လို့ပါ ။ ပုဂ္ဂိုလ်​စွဲ ဂုဏ်​ဂဏ စွဲလည်း မထားတတ်​လို့ပါ )
မီ မီ says: စေတနာမှန်တဲ့ဆရာဆရာမတိုင်း ဒီစနစ်မကောင်းတာသိပါတယ်ဦးလေးရှင့်
Ma Ma says: အဘနီပြောသလို ကျူရှင်သင်တာကိုပဲ အားသန်ပြီး မပြောင်းချင်ဆရာ/မတွေ ရှိနိုင်သလို
kai says: အကြီးအကျယ် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားသော မြန်မာနိုင်ငံ “ကျောင်းသားတွေ နိုင်တယ်” ဟူသည် ယခုအခါ မြန်မာလူမှုရေးမီဒီယာများပေါ်တွင် အထင်ကရ ကြွေးကြော်သံတစ်ရပ် ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် တကယ့်အရှိတရားသည် အနည်းငယ်ပို၍ ရှုပ်ထွေးနေသည်။ သရော်တော်တော်ပြောရပါက ပထမဆုံး အနိုင်ရရှိသူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူ၏ ပါတီဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုနောက်ဆုံး နှိမ်နင်းခဲ့မှုက အတိတ်က စစ်တပ်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ပြန်သတိပေးလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ စစ်တပ်က ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုပေးထားသော လက်ရှိ အာဏာရပါတီကို ဆန့်ကျင်ကာ မဲပေးကြမည့် အလားအလာများနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းက လူထုထောက်ခံမှု အခိုင်အမာရရှိထားနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် NLD ကို အင်အားထပ်လောင်း မြင့်တက်သွားစေခဲ့သည်။
naywoon ni says: အဲ့ဒါ အမှန်​ပဲ သူကြီး​ရေ ​နောက်​က လိုက်​လာတဲ့ ​လောက်​ကိုင်​နဲ့ တရုပ်​ကြီး ကိစ္စရယ်​ ပြည်​သူတစ်​​ယောက်​ကို ​ကြွေးငါးသိန်း​လောက်​တင်​​နေပါတယ်​ ဆိုတဲ့ ဖွချက်​ရယ်​က လက်​ရှိ အာနာ ရပါတီ ကိုထည့်​မဲ့ မဲ​တွေထဲက ရာနှုန်း​တော်​​တော်​များ များ နှုတ်​ယူသွားလိမ့်​ဦးမယ်​ နဲ့တူရဲ့ ။